क्रिकेटर हरभजनको चड्कन खाएर रेस्लर भुइँमै ढले ! - Everest Dainik - News from Nepal
क्रिकेटर हरभजनको चड्कन खाएर रेस्लर भुइँमै ढले !
नयाँदिल्ली । भारतीय चर्चित क्रिकेटर हरभजन सिंह राष्ट्रिय टोलीमा नपरेको धेरै भइसक्यो । तर रेस्लिङको रिङभित्र उनले देखाएको दादागिरीको अहिले चर्चा व्यापक भएको छ ।
पछिल्लो साता भज्जी ग्रेट खलीको एकेडेमी पुगे । जहाँ उनले कन्टिनेन्टल रेस्लिङ इन्टरटेन्मेन्ट (सिडब्लुई) को प्रमोशनमा भाग लिएका थिए । त्यहीँ उनले आफ्नो थप्पडको जादु देखाएका हुन् ।
ट्याग्स: Cricketer Harbajhn Singh